Modesto မှစ. သို့မဟုတ်စေရန်ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု, , CA
ဇိမ်ခံပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း Modesto, ငါ့ကိုခေါ်ဆိုခအနီးကယ်လီဖိုးနီးယားလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ 877-941-1044 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဘို့အ oneway ဗလာခြေထောက် Air လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုငှားလေယာဉ်ပျံလေကြောင်းလေကြောင်းခရီးသွားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ချက်ချင်းကိုးကားများအတွက်, အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခရီးသွားခေါ်ဆိုခ 877-626-9100 & သငျသညျအနီးဖွင့်ထားခြေထောက်သဘောတူညီချက် deadhead.
ကော်ပိုရိတ်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ဖြစ်ရပ်များနည်းလမ်းအားဖြင့်ပေးမြောက်မြားစွာအကြိုးခံစားခှငျ့ကြောင့်အသက်အရွယ်နှင့်ဤသည်နေ့ရက်အတွင်းအတော်လေးလူကြိုက်မဟုတ်. ဤအချိန်တွင်မှထွက်ရှိအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ငှားရမ်းတွေ့ရှိရန်အလိုဆန္ဒ? အဆိုပါလျှော့စျေးတန်ဖိုးဝန်းကျင်သင့်ရဲ့ဇိမ်ခံစင်းလုံးငှားလေယာဉ်ပျံခရီးစဉ်အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအားဖြင့်သင်တို့အဘို့အဘယ်သူမျှမကုန်ကျမှာခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရဲ့တစ်ဦး-အသင်းကိုရွေးချယ်ချင်!
လေကြောင်းလိုင်းခရီးသွားနေတုန်းပဲအမြန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်, အလုံခြုံဆုံး & ရှည်လျားသောအကွာအဝေးခရီးဆုံးနေရာလေးကိုနည်းဗျူဟာ. ကံမကောင်းသဖြင့်, မတည်ရှိကွဲပြားခြားနားအစက်အပြောက်ဖို့လမ်းကြောင်းဖွင့်တဲ့သူအနည်းငယ်မျှသာအမျိုးမျိုး. ကျနော်တို့ခရီးစဉ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဖို့အချိန်ယူအခါတိုင်း. အဘယ်အရာကို-လျှင်စီးပွားဖြစ်ပျံသန်းမှုပေးထားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ဖြစ်နိုင်မဟုတ်?
အပန်းဖြေသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်နိုင်ငံတွေကိုခရီးလှရှိမရှိ, သင်သည်သင်၏တည်နေရာမှာ get တစ်ခုသီးသန့်လေယာဉ်တင် chartering နှင့်စက်မှုမြင့်တက်အကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်. အများသောသူတို့, ကြောင်းစျေးကြီးလေထု-ဘတ်စ်ကားဖြစ်ပါတယ်စည်ကားတူသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေယာဉ်ခံစားရတယ်. ခရီးသည်တင်၏ဝါသနာအခန်းကန့်သတ်, တကယ်မနှစ်မြို့ဖွယ်သောခရီးစဉ်များအတွက်လုပ်ကူညီပေးနေ.
သငျသညျသွားလာချင်ပေမယ့်လူအစုအဝေးကိုမုန်းလျှင်သင်တို့ကိုစီးပွားဖြစ်ပျံသန်းမှုအပေါ်တွေ့ကြုံခံစား, သငျသညျ Modesto စဉ်းစားရန်လိုပေမည်, တနည်း, CA ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ငှားရမ်းခွင့်. ကျနော်တို့အခါသမယရုံတန်ဖိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုပင်ဖြစ်သည်နားလည်သဘောပေါက်တခါပုဂ္ဂလိကလေယာဉ် functioning ရှေးရှေးနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိမှပစ္စုပ္ပန်အများအပြားအရေးပါသောအားသာချက် charters. သိမ်းပိုက်သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်, သငျသညျသိသာထင်ရှားသောစီးပွားရေးအရလေကြောင်းဆိပ်ကမ်းများတွင်လှည့်ပတ်တက်ရောက်ရန်နီးပါးမျှအချိန်ရှိသည်.
ပျမ်းမျှခရီးသည်များအတွက်, ပျံစင်းလုံးငှားဖြစ်ကြောင်းဇိမ်ခံလေယာဉ်ထက်စီးပွားရေးကို-လူတန်းစားအကြောင်းပိုမိုဖြစ်ပါတယ်. နှစ်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်မတိုင်မီဆယ်စုနှစ်တစ်ခု, တစ်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့နှင့်အလားအလာဖြေရှင်းချက်အဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေယာဉ်အတွက်ပျံသန်းမယ့်အရူးအယူအဆတူသောထင်ရှားစေခြင်းငှါ. ဒါကအတူတကွပေဖော်ရွေပုဂ္ဂလိကပဋိညာဉ်စာတမ်းဂျက်အဖွဲ့နှင့်အတူယနေ့အဘယ်သူမျှမကပိုမှန်ကန်
ကဇိမ်ခံပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ပျံ Chartered ပေးအပ်မှကြွလာသောအခါအများကြီးရွေးချယ်မှုရှိတယ်. ဒါဟာတလမ်းအမှန်တကယ်အိမ်ပြန်သွားကြဖို့ပါဝင်သောပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုအချည်းနှီးသောခြေဘဝါးလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဆိုလိုရာဗလာ-ဒူးပျံသန်းအထူးအတူမဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာမပြုစေခြင်းငှါနဲ့သူတို့ရဲ့ဦးတည်ရာမှတစ်ဦးချင်းစီခရီးသွားလာစင်းလုံးငှားခဲ့သည်.
ကလူအများကြီးတစ်ခုသီးသန့်လေယာဉ်ပျံများငှားရမ်းမယုံနိုင်လောက်အောင်စျေးကိုအဆမတန်မြှသည်ဟုမထင်, သို့ရာတွင်သင်မိသားစုနှင့်အတူဥပဒေကြမ်းကိုဆွေးနွေးသည့်အခါအဆုံးမဲ့ဆုလာဘ်ရှာတှေ့နိုငျ, မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါငျးအသငျးမြား. ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် deadhead ရှေ့ပြေးလေ့လာရေးခရီးအထူးအရာတစ်ခုခုသည်. ဒါဟာခြွင်းချက်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျတခုတစ်ခုလုံးကိုလေယာဉ်ပျံ၏အဆောက်အဦကိုနှစ်သက်ယူ, အားလုံးနှင့်သက်သာကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်.
Modesto အတွက်သီးသန့်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်အကူအညီများဝ, ကယ်လီဖိုးနီးယားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခရီးစဉ်တစ်ခုမရှိမဖြစ်ခြေလှမ်းကတိပေးအတွက်ကျိန်းသေဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအများဆုံးအသီးအနှံများရဲ့, ထိရောက်သော, စည်းစိမ်ကြီသော, နှင့်ခရီးသွားလာနေရာလေးကိုနည်းလမ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးပျံနေဖြင့်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာမှရလဒ်များ 20% ပိုပြီးအထွက်.
သင်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်သောအရာကိုအောက်မေ့ဖြစ်ကပါဝင်ပတ်သက်လာသောအခါလေယာဉ်စင်းလုံးငှား၏ထွန်းအထူးသဖြင့်အများအပြားအမှုအရာဖြစ်ပွားခဲ့သည်. တ-လက်မှ, ပိုပြီးတစ်ဦးချင်းစီတည်ငြိမ်မှုစိုးရိမ်ပူပန်၏မြင့်တက်ခရီးသွားလာအဖြစ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုနှောင်းပိုင်းက၏အဖြစ်စခွေငျးငှါ, ခရီးသွား cancel.
သငျသညျအဖှဲ့အတှကျခရီးအဘို့ကို set up တစ်ကော်ပိုရိတ်လေယာဉ်ဆည်းပူးလိုပါက, အကျပ်အတည်းသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီကျေနပ်မှုတစ်ခါတစ်ရံတွင်အပေါငျးတို့သကမ္ဘာအဝှမ်းမှဖြစ်ပျက်, နှင့်သင်တို့ကိုလည်း Modesto မှစ. သို့မဟုတ်စေရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုလိုအပ်များပါတယ်, တစ်နေရာတည်းတွင်တယောက်ကိုရရှိရန်, CA.
Modesto, အင်ပါယာ, Ceres, မြစ်ကမ်း, Keyes, Hughson, output ကို, Ripon, Escalon, Turlock, Oakdale, Denair, Waterford, ပက်, Hickman, Vernalis, Westley, ကျီးကန်းကမ်းတက်, Manteca, Hilmar, ဒေလီ, Lathrop, Ballico, Stevinson, Livingston, လူသစ်, Cressey, ပြင်သစ်စခန်း, Farmington, ဖွစျတဲ့စတော့ချ, Tracy, Linden, Winton, Copperopolis, Atwater, Lyoth, Holt, Snelling, la Grange, ဂျိမ်းစ်တောင်း, Gustine, Merced, ဗစ်တာ, တရုတ်စခန်း, ချိုင့် Springs, Lodi, Lockeford, Byron, Burson, ကောင်းကင်တမန်များစခန်း, Altaville, Wallace, Moccasin, ကလီ, Woodbridge, တောင်ပေါ်မှာ Hamilton က, စံ, Acampo, Vallecito, Big Oak Flat, ဒေါက်ဂလပ် Flat, Hornitos, စန်း Andreas, ဆိုနိုရာ, စန်တာရီတာပန်းခြံ, ကိုလံဘီယာ, Planada, Knightsen, အယ်လ် Nido, Brentwood, Murphy, ဗေသလကျွန်း, Soulsbyville, ယင်းက Grand, Isleton, ဝံပုလှေ, Hathaway ထင်းရှူး, မော်ဂန်ဟေးလ်, Ryde, စန်းမာတင်, Avery, Chowchilla, https://www.modestogov.com/314/လေဆိပ်မြေပုံ